Iselfowuni ilapha. Indawo yakho ayiyo. | Martech Zone
Iselfowuni ilapha. Indawo yakho ayiyo.
NgoLwesihlanu, Oktobha 7, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Siye saqhuba uvoto lwethu kule veki iphelileyo saza sabuza ukuba zingaphi iisayithi zakho zeshishini ezenzelwe ukubonwa kweselfowuni. Eyethu I-Zoomerang poll Iziphumo zahlulahlulwa ngo-50/50… isiqingatha sineziza zeenkampani ezikulungeleyo ukubonwa ngeselula okanye phantse apho. Lubalo olubuhlungu olo.
Lubalo olubuhlungu kuba iwebhsayithi ehambayo iyiyo Sele ilapha. I-Comscore isandula ukukhupha idatha eyi-48% yezigidi ezili-112 zaseMelika ezisebenzisa iifowuni ngoku basebenzise izixhobo zabo rhoqo ukufikelela kumxholo wemithombo yeendaba, ngaphandle kwelizwi okanye isicatshulwa kwaye iya kuba ngaphezulu kwe-50% ngokuphela konyaka.
Iindawo ezinkulu zinika ingxelo yenxalenye enkulu yezithuthi zabo ezivela kwiselfowuni: INew York Times ifumana i-7.6%, i-USA namhlanje ifumana i-10% kwaye i-LA Times ifumana i-11.2%. Iindawo zosasazo lwentlalo zibona ukukhula okukhulu, malunga ne-12.5%… kwaye abafundi bahlala amaxesha angama-2.8 ngaphezulu!
Sithumele iposti yamva nje ebonelelweyo Iindlela ezili-10 zokupapasha umxholo wendawo yakho kwisixhobo esiphathwayo. Ayifuni ukuba inkqubo yolawulo lomxholo wakho ibe ilungile xa sele isisombululo esingcono.
Abahlobo bethu I-Marketpath isandula ukukhuthaza iselfowuni iminikelo, echaza:
Ukwenza uguqulelo lweselfowuni lwewebhusayithi yakho lubonelela abaphulaphuli bakho ngesisombululo esihlangabezana neemfuno zabo zeselfowuni, ezahluke kakhulu kuneemfuno zesiko lekhompyuter okanye abasebenzisi beintanethi kwi-intanethi. Abasebenzisi be-Intanethi abaselfowuni bafuna iiwebhusayithi ezilula, ezikhawulezayo, nekulula ukuzisebenzisa, kwaye zibonelela ngomxholo ofanelekileyo kumsebenzisi weselfowuni.
Ukuba usebenza nomboneleli wesevisi yesoftware ongenayo indlela yokujonga umxholo wakho ngokufanelekileyo kwisixhobo esiphathwayo, sele ubeka ukugcwala kwakho emngciphekweni omkhulu. Ndiyamangaliswa kukuba zingaphi iinkqubo ezikhoyo apho ezingakhange ziqale nokuphuhlisa istayile eselfowuni, ungaze ujonge ujongano olwenziwe ngeselfowuni.
I-Econsultancy ikhupha isiKhokelo seNtengiso ye-B2B
Okt 7, 2011 ngexesha 1:49 AM
Ndishushu cuz ndiyahamba! Awuyi kuba akunjalo! Kungenxa yoko le nto, kungenxa yoko, kungenxa yoko le nto ndishushu!